kwezimo ezingezinhle emizini kuholela ukuwohloka njalo impilo izakhamuzi zakhona, kuba nomthelela ikakhulukazi acute ezinganeni. Mhlawumbe akukho abazali abangafuni ukuvikela umntwana wabo kusukela imvelo okungekuhle. Ngakho-ke, abaningi kokushiya eholidini ukuze zokulala, ukuthuthela amakhaya iholidi noma athumele ingane kuleyo ndawo, lapho ngasizathu simbe izinsuku zakhe azihlukile kakhulu komunye nomunye. Nokho, akuwona wonke umuntu ithuba, futhi kwabaningi indlela yokuphuma yalesi simo yilezi ekamu ihlobo yezingane.
Bachuma kwamaSoviet, amakamu izingane ziya alikakangilahlekeli ngemva kokuwa kwayo, okuyinto wenza kube lula ukuphila kwabazali. Amasiko zaleli holidi kancane kancane wavuseleleka. Futhi, naphezu kwezinkinga elalibhekene okuncane ngezimali, ke namanje ithuba elikhulu diversify yokuchitha isizungu ingane, ngenkathi ukuqiniswa kokunikezwa kwezidingo zezempilo yakhe. Ngaphezu kwalokho, ekamu iholide has a lot of izinzuzo.
amasosha omzimba kukhuphuke
Amavithamini, umoya ohlanzekile, ukukhanya kwelanga microclimate enempilo yehlathi noma ulwandle-konke lokhu kunomthelela impilo yengane. Futhi izindleko amaholide afana incane kakhulu uma kuqhathaniswa zokungcebeleka.
Permanent imvelo izingane hhayi kuphela izingane zikuhlomele sociability, kodwa futhi ngokuzimela. Akufundayo ukwenza izinqumo, mhlawumbe, akulona iqiniso ngaso sonke isikhathi, kodwa umkhuba enza ngayo umsebenzi walo. Umuzwa umthwalo izenzo izimisele lifundisa indlela enzima umuntu inkinga.
Phakathi nenkathi kaKhisimusi umntanami asetshenziselwa nsuku zonke isimiso, schedule, ukunamathela engaphansi ebhekiwe babeluleki. Ngaphezu kwalokho, abafundisi ungayeki phezu-angahlala e ingane beqa imingcele ethile. Nokho, akubona bonke abadala ziyefana izindlela zabo, ngakho pre-ubuze abanye abazali imibono yabo iqembu resort.
Summer emakamu ekuqaleni yakhelwe ziyabonisa futhi Uhlelo lokuhlumelelisa enemininingwane, ukudla ukudla okunomsoco, ukuzijabulisa kanye yokuhlala. Awunayo sokukhathazeka mayelana nokusetshenziswa kungenzeka ukudla okusheshayo nokunye ukudla okungenampilo. Nokho, nakuba zikhona kilomlayo, phezu izindawo ezikhethiwe kuncike ngokuqondile. Abazali abaningi ababhekene ezinye ukwesaba nokukhathazeka lapho ukuthumela ingane yabo esibhedlela, futhi ngezinye izikhathi senqabe ukuhamba, wakhetha ukuba bangahambi naye kuzo nomzana umkhulu nogogo. Kodwa lokhu okuhlangenwe nakho akuzona okuhle izizathu t. Ukuze. Ukusetshenziswa amaholide afana akunakuphikwa. Wena ngokwakho uzobona uma ingane yakho iza ekhaya esekhulile, bejabule, ekhululekile futhi egcwele esiqala emihle.
"Inkanyezi" (Camp, Ryazan)
Lesi sikhungo kuhlanganisa e ubulungu yayo eyinkimbinkimbi elise 35 km kusuka isikhungo lesifunda e Spassky wesifunda. Ihlanganisa indawo resort nge. Vypolzovo. Camp "Inkanyezi" kuthatha ogwini olunothile amachibi Meshchersky onqenqemeni, sizungezwe ehlathini. Lapha, indawo ihlanzekile, futhi izikhungo enkulu yezimboni zitholakala kude okwanele.
Camp "Inkanyezi" izihlalo ngabantu abangu-200. indawo Its kuqashelwe ubusuku nemini, kanye azungezwe ibiyelwe. Amakamelo abathukuthelela siqu kubhayela entsha enamandla. Muva nje, ngo-2007-2008, kwenziwe ukulungiswa, phakathi kwesikhathi lapho kabili ezicwebezelisiwe amafasitela, futhi endaweni yokwamukela izivakashi, sesibili (2 no-3) isakhiwo ezintathu storey babe umbala TV, igumbi nomhlangano imishini ekhethekile multimedia, ifenisha ukhululekile, amabhiliyade, kanye Karaoke bar. Ukuze beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni ukubeka eyabelwe esalisekela futhi esinezitezi ezintathu izakhiwo.
"Inkanyezi" ikamu ehlobo kuhlanganisa 5 lalungiswa ngokugcwele izakhiwo zokuhlala, ukuhlelwa kabusha okwenzeka ngo 2007-2009. Phakathi nalesi sikhathi kwalungisa ezinkulu, amawindi plastic ifakiwe, ifakwe amanetha omiyane, amanzi basusa le Artesian kahle, amalahle ezizimele, ngakho kukhona njalo amanzi ashisayo. Ekamu, kukhona i-Wi-Fi, iqinisekisa contact unomphela "izwe ngaphandle".
Leli bhokisi 1 kungadla 70 abahambi. Ukuze zabo eyabelwe 16 quadruple futhi 4 amakamelo double nendawo ethize 18 no-10 sq. M. ngokulandelana, 4 izindlu zokugezela kanye zokugezela abaningi. Kukhona 2 amahholo ifakwe TV futhi SOFAS, kanye ikamelo inkomfa, igumbi amabhiliyade nesigaxa karaoke.
izivakashi 50 angazamukela isakhiwo № 2. Kukhona 4- futhi embhedeni-2 amakamelo, it has okuqala angu-12, okwesibili - 2, futhi endaweni yabo 18 no-10 m .. Izinsiza zihlanganisa 2 ezindlini zangasese nasezincwadini 2 izihlambi.
3 izindlu abantu 30. Ngcono Ubude ukhonza 9, 6 zazo yokuhlala ezine isivakashi, futhi lonke iqembu 2. Ngazo zonke labelwe zokugeza ezimbili, izihlambi ifakwe.
Ngaphezu kwalokho, kungenzeka isheke e 2 embhedeni-amakamelo ukhululekile, okunikeza igumbi umuntu yangasese kanye eshaweni.
I studio ikamelo 1 30 sq. M. 2 nge embhedeni kabili, usofa, ithebula, satellite TV, esiqandisini.
Suite 50 sq. M., It siqukethe egunjini lokulala kanye eziphilayo. Kusuka lapha isimo has, ngaphezu isethi odlule izihlalo ezimbili.
Le ndlu kuhlanganisa ikamelo nokungcebeleka, lapho kukhona usofa, itafula nezihlalo inkampani zabantu 8, i-DVD-player, i-TV satellite, heater kagesi. I lokulala kugcinelwe umbhede double, ikhishi ngaphansi isitofu, isiqandisi nempahla ezikhethekile. Kukhona sauna nge indawo yokubhukuda encane. Inani indawo egumbini -. 120 square metres.
Cottage yakhelwe 8 izivakashi, kukhona 3 okulala double abafika kwabangu-10 sq. M., Umkhakha yokuphumula nge SOFAS, satellite TV and DVD-player, ikhishi kanye isiqandisi, isitofu, itafula nezihlalo.
Kwethulwa egumbini lokuphumula Suite bese lokulala ifakwe usofa, i-TV, efrijini, iketela, etafuleni lokudlela, imibhede emithathu, ikhabethe kanye hairdryer.
Okunye ongakusho ekubhekeni izihlambi ngabanye kanye zokugezela kuyihhotela, okuyinto yokuhlala abantu 52. Inketho amakamelo Twin +, Twin, Kathathu, Superior, Single.
Impilo eziyinkimbinkimbi muntu phakathi nokuvakasha kwazo e oyoziletha eziningi okungavamile, izinkumbulo ezithandekayo nakho kufanele wenyanga eyodwa kuyoba kuhle. Le ndawo eyingqayizivele ubuhle bayo: Amapaki egcwele uhlaza amazing, lihambisana Oka eduze zishiyane kudala ukubuka indawo ekhangayo. Kulesi suku amaholide agcwaliswa hhayi kuphela "ukudla okungokomoya" kusukela nokucabanga kwezwe, kodwa futhi kwemidlalo okuqhubekayo nsuku zonke, kanye nokungcebeleka elula, kuhlanganise Ukushushuluza, ukushushuluza, ibhola, amabhiliyade nokuningi. N. Ukuze iholidi lapha kungenziwa kukhethwe njengenye abadala kanye nezingane, okuyiwona Animators beveza izinhlelo ezintsha kanye ezintsha ezithakazelisayo.
Camp "Inkanyezi" (Perm)
Ukusungulwa esisogwini 8 amahektha. Kusukela Perm impahla 5 km. Le ndawo elinesimo sezulu esipholile, ephulukisa umoya ohlanzekile. ikamu Wezingane "Inkanyezi" itholakala phakathi ehlathini futhi ezungezwe nature enhle. Lapha kukhona konke ukuze sivuselele umoya wakho futhi ukuthola ophethe vivacity isikhathi eside. For amaholide umnyango zokungcebeleka avulekele unyaka wonke. Camp "Inkanyezi", isithombe ongawabona kulesi sihloko senzelwe izivakashi abaneminyaka engu 7-17 ubudala. Inombolo enkulu izivakashi shift ngalinye - abantu abangaba ngu-300. Le ndawo lapho ekamu "Inkanyezi" (Perm), ifakwe i ongaphandle indawo yokubhukuda nge canopies ukuthi ukuvikela elangeni izihlambi. Kukhona igumbi yezemidlalo, enkundleni yomdlalo webhola, basketball ne-volleyball izinkantolo, sokudlala endaweni, ithrekhi ukugijima, club kanye yokudlela.
Indawo kanye namanye amasevisi
It inikeza izivakashi ekamu "Inkanyezi" inikeza 3 zokulala ku 3 izibuya nge amakamelo for 4-5 izivakashi. Toilet, eshaweni nosinki zitholakala ngamunye phansi. Ukudla asizwa Ikamelo lokudlela kanti udla 5 egcwele. Imenyu kuhlanganisa inyama kanye nenhlanzi, yobisi nemifino izitsha, imifino, amasaladi, ayo, kuhlanganise namaswidi namakhekhe. Ukuze ngempumelelo inikeza ezihlukahlukene imisebenzi yokuzilibazisa, engeke avumele ingane ukuba be bored. Ntambama aphethwe disco noma ukubukela amabhayisikobho. Ngaphezu kwalokho, amaqembu umsebenzi ekamu, ukuthuthukisa amakhono okudala izivakashi encane. Ingane uzokhumbula ekamu isikhathi eside "Inkanyezi". Izithombe ezithathwe ayezidinga eholidini, uzokhunjuzwa okuvelele.
Uhambo Italy: ngesitimela noma ngemoto?
Valeria kanjani esemdala na? Lo mculi kakade
Watermarks - indlela ukudala uhlelo. Indlela ukususa watermark kulesi sithombe?